Akụkọ - Otu esi echekwa ma jikwaa chassis crawler bulldozer
Crawler bulldozer bụ ihe dị mkpa inyeaka akụrụngwa na Ngwuputa technology.Mines ugbu a na-eji ụdị dị ka Komatsu Caterpillar.The kwa afọ undercarriage akụkụ mmezi na-eri nke ndị a crawler bulldozers ihe dị ka 60% nke ngụkọta mmezi cost.Users họrọ elu-ọgwụgwụ mma na mma mgbe. -ọrụ ire ere dị ezigbo mkpa. Ihe na-esonụ bụ mmeghe nkenke maka nlekọta na njikwa nke usoro chassis bulldozer
1.The chassis Ọdịdị
Chassis nke crawler bulldozer nwere akpụkpọ ụkwụ egwu, njikọ yinye, igwe egwu egwu, onye na-adịghị arụ ọrụ, cylinder erughị ala, igwe crawler, sprocket mbanye, nguzozi nguzozi, pivot etiti na ihe ndị metụtara ha.
2.Wear ihe nke chassis
A na-ekpebi isi ihe eji eme ihe nke chassis site na ihe atọ: ọnọdụ ala na kọntaktị na chassis, ngwa ngwa nke ngwa ngwa na ibu nke ngwá ọrụ. Naanị ihe 3 ndị a na-eju afọ kpamkpam, ikike na-eme ka ọkpụkpụ na-eyi chassis.
Enwere ike ichikota chassis nke ihe eji eme ihe ọzọ, nwere ike ijikwa akụkụ ndị ahụ, gụnyere mgbanwe mgbanwe nke yinye egwu, obosara nke akụkụ (nwere ike ịhọrọ), ngwa ngagharị ngwa na anya, chassis na-ebugharị akụkụ iyi nke imekọ ihe ọnụ na ọnọdụ mmanu mmanu, ojiji nke usoro nhazi, chassis na sliding na ala, na nkà na-arụ ọrụ onye ọkwọ ụgbọ ala, wdg. Akụkụ ndị a na-achịkwaghị achịkwa, gụnyere ihe na-ejikọta na chassis, mmetụta mmetụta kpụrụ na ihe ahụ n'oge mmegharị ahụ, nhazi nke elu chassis. mgbakwunye na mmiri nke ala, wdg.
3.Maintenance nke chassis
Caterpillar bulldozer seriers nke D9, D10 na D11 ojiji yinye akara bụ ígwè akara, ya sealing dị nnọọ mma, eyi ndụ nke banyere 4000H.At nso 4000H, akara malitere ihihi mmanụ, na-eme ka akọrọ esemokwu na njikọ pin.To maximize chassis ndụ, njikọ akàrà ga-dochie nso 4000H na-eji.
Nkezi ndụ nke akara nke njikọ ahụ bụ 4000H, ma ndụ nke njikọ dịgasị iche dabere na ojiji na elu.N'ezie, ndụ nke njikọ ahụ bụ 3000-5000h. Ọ bụrụ na ngwá ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na-adịghị mma ma na-eme njem dị anya ugboro ugboro, ndụ nke njikọ njikọ ga-ebelata. Iji mee ka ndụ ọrụ nke njikọ ahụ dị ogologo, mgbe ndụ ọrụ gasịrị. gafere 3000H, a ga-enyocha akara ahụ ugboro ugboro maka ntapu.Ozugbo achọpụtara ntanye ahụ, a ga-edochi akara niile nke njikọ njikọ ahụ ozugbo.N'otu oge ahụ, a ga-enyocha ogwe aka nkedo njikọ maka mmebi, ma ọ bụghị ya, a ga-ehichapụ eriri eriri, eriri pin, njikọ njikọ n'oge na-adịghị anya.
The elu nke dum track akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ịdị na-agbanwe agbanwe, nke mere na ọrụ nke dum ụgbọ ala ahụ na-esikwu ike, na-eje ije vibration na-ebelata, na ọrụ ndụ nke akara na eyi-eguzogide akụkụ na-mma.Mgbe wear ogo nke track. efere ruru ma ọ bụ na-erughị 100% nke uru a na-anabata (ya bụ, mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ nke efere egwu bụ 38mm), akpụkpọ ụkwụ egwu kwesịrị iwepụ ma mezie ya.Mgbe ogo iyi ahụ gafere 120% nke uru a na-anabata (mkpụrụ osisi dị elu bụ naanị 25.5mm), efere egwu enweghị uru nrụzi.
The eyi akụkụ nke etiti na-agụnye: track roller, idler, carrier roller, sprocket na tensioning cylinders na ndị ọzọ na-akpụ akpụ akụkụ. N'ihi na ndị a na-akpụ akpụ akụkụ na-emekarị na-edebe mmegharị nke ọnọdụ, ọ bụla 2000H na-elele fastening bolts nke ọ bụla akụkụ nke. fastening ọnọdụ, nnọchi nke arọ wheel unilateral na bilateral ọnọdụ, ọ bụla 2500H ka ụgbọ ala etiti pin a lubrication.Mgbe dayameta nke eyi nke track ala rute ma ọ bụ nso 217.5mm (na-eyi ego nke idler dị nso ma ọ bụ na-enweta 100% nke uru a na-anabata), ya bụ, a ga-edochi ọnụ ahịa uwe na oge mgbe 32.5mm, ọ dịkwa oke mkpa ịhọrọ àgwà dị elu na ezigbo ọrụ mgbe ire ere iji mepụta ndị na-emepụta ihe n'okpuru ụgbọ ala.
A na-ebupụ ngwaahịa anyị na ngwọta anyị na Europe, United States, Russia, Britain, France, Australia, Middle East, South America, Africa, Southeast Asia na mba ndị ọzọ na mpaghara.Our ngwọta na-ukwuu ghọtara site ahịa gburugburu world.Our ụlọ ọrụ na-agba mbọ na-anọgide na-emeziwanye irè nke anyị management usoro na-ebuli ahịa satisfaction.We ezi obi na-atụ anya na-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị ahịa anyị na-emepụta mmeri-emeri future.Welcome isonyere anyị!
Oge nzipu: Ọktoba 13-2021
Roba Track Rollers, Excavator ịwụ ịcha Edge, Ihe na-agba Track Roller, Ebu n'okpuru ụgbọ ala Excavator, Bolt siri ike, Akụkụ ihe mkpuchi ịwụ ịwụ,